October 8, 2021 - Babal Khabar
Oct82021 by बबाल खबरNo Comments
पहिले हेर्नुस यो भिडियो, तपाईं हाम्रो अस्वास्थकर खानपान, जीवनशैली, हर्मोनल परिवर्तन जस्ता थुप्रै कारणले तौल बढ्छ । तौल बढी हुनु वा घटी हुनु भनेको शारीरिक समस्या हो । अस्वभाविक तौल बढी हुनाले विभिन्न रोग निम्त्याउँछ । शरीर भद्दा देखिन्छ । अस्वभाविक रुपमा कम तौल हुनु पनि स्वास्थका हिसाबले ठीक होइन । मानिसको तौल कति हुनुपर्छ ? यसको जवाफ उक्त व्यक्तिको उचाई र शारीरिक बनौटलाई आधार मानेर दिन सकिन्छ । शरीरको तौल बढी हुनु र कम हुनु दुबै रोगको संकेत हो । त्यसैले आफ्नो तौलबारे जानकार हुनुपर्छ । यसका लागि सहि तरिका हो, बिएमआई अर्थात बडी मास इन्डेक्स । यो मोटोपन जाँच्ने सर्वमान्य मानक हो । कसरी जाँच्ने त तौल कति हुनु पर्छ भनेर ? हाम्रो शरीरको लम्बाई र तौलको हिसाब बिएमअईबाट निकाल्न सकिन्छ । तपाईले आफ्नो शरीरको लम्बाई सेन्टिमिटरमा नाप्नुपर्छ र, त्यसमा १ सय घटाउनुपर्छ । जस्तो कि, तपाईक
हाम्रो घर वरिपरि प्रस्सत मात्रामा पाईने यो झार प्रयोग गर्न जाने हुन्छ यति धेरै नसोचेको फाइदा
पुरा खबर, अहिले मानिसहरु चिकित्स उपचार पद्धतिमा मात्र भर नपरी आयुर्वेदिक पद्धतिइ पनि अगालिरहेका छन्। किन भने चिकित्सा पद्धतिका धरै साइड इफेट रहेको हुन्छ त्यसैले बजारमा अहिले थुपै जडिबुटी औषधि पाइने गर्दछन। आज हामी तपाइलाई हाम्रो वरपर पाइने दुधे झारको बारेमा हामी चर्चा गछौ। जुन झारको प्रयोगबाट थुपै रोगको उपचार गर्न सकिन्छ। दुधे झार सेतो दुध जस्तो रस निस्कने काण्ड भएको पोथ्रा वर्गमा पर्ने औषधीय गुण भएको वनस्पति हो। यसलाई नेपालीमा दुधे झार, अंग्रेजीमा कमन स्पर्ज भनिन्छ। यसको बिरुवालाई ‘आस्थमा प्लान्ट’ भन्ने गर्दछ। किनकि यो दम रोग (आस्थमा) को घरेलु उपचारमा प्रयोग हुन्छ। उक्त बिरुवामा ट्राइटरपेन, फाइटोस्टेरोल्स्, टानिन्स्, पोलिफेनोल्स्, फ्लाभोन्वाइड्स, इसेसिन्यल आयल, अल्कल्वाइड्स, सापोनिन्स्, एमिनो एसिड्स, मिनरल्स् (खनिज पदार्थहरु) पाइन्छन्। आस्थमाको चियाले सुख्खा खोकीलाई नरम
महिनावारीको समयमा एकदमै पेट दुख्ने समस्या छ ? यी घरेलु उपाय लगाउनुहोस !
पुरा खबर, हाम्रो स्वास्थ्य नै हाम्रो जीवनका लागि सबै भन्दा ठूलो कुरा हो। जब हामी स्वस्थ हुन्छौँ, तब मात्र जीवनमा खुसी मिल्छ, काम गर्न मन लाग्छ र जीवनलाई सफल रुपमा स्थापित गर्न सक्छौँ । तर हाम्रो स्वास्थ नै सफल भएन भने हाम्रो जीवन नै असफल बनिदिन सक्छ।हामीले सानो तिनो विरामी भयौँ भन्दैमा डाक्टरी औषधि सेवन गर्नै पर्छ भन्ने छैन्। हामीले घरेलु औषधिको सेवन गर्दा स्वास्थ राम्रो पनि हुन्छ तर सानासाना रोग पनि निको हुने गर्दछन्। महिनावारी हुँदा पेट देख्ने समस्या आम नारीको समस्या जस्तै बनेको छ। कसैलाई दुखाइ कम र कसैलाई बढी हुने मात्र हो। महिनावारीका समयमा पेट दुख्ने समस्याबाट छुटकारा पाउन तपाई हामीले हर प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ । तर पनि छुटकारा पाउन सकिरहेका हुँदैनन्। आज हामी तपाईलाई यस्तो घरेलु उपायका बारेमा बताउन जाँदै छौँ, जसले महिनावारीका समयमा हुने दुखाईबाट राहत दिलाउँछ। १:दुध र बे
चर्चित बलिउड नायिका यमी गौतम कहिल्यै ठिक नहुने यस्तो रोगबाट संक्रमित, इन्स्टामा यस्तो लेखिन
पुरा खबर, भारतीय अभिनेत्री यमी गौतमले आफू वर्षौँदेखि कहिल्यै ठिक नहुने ‘केराटोसिस पिलारिस’ नामक छाला सम्बन्धी समस्यासँग जुधिरहेको खुलासा गरेकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा एक तस्बिर शेयर गर्दै लेखेकी छिन् “मेरो इन्स्टा परिवारलाई नमस्कार । मैले हालै फोटो सेसन गराएँ । ती फोटाहरूमा मेरो स्क्रिन प्रोब्लम ‘केराटोसिस पिलारिस’ लाई लुकाउन पोस्ट प्रोडक्सनमा पठाउनु थियो, त्यतिबेला मैले सोचें, यमी तँ सत्यलाई किन स्वीकादिनेस् जसलाई यो समस्याबारे थाहा छैन, म बताउँछु कि यो रोग लागेपछि स्क्रिनमा छोटाछोटा दाना पलाउँछन् । म त्यही समस्याबाट पीडित छु ।” उनले आफूलाई यो समस्या टिनएजबाटै सुरु भएको र यसको अहिलेसम्म कुनै उपचार नभएको पनि बताएकी छिन् । उनले यो समस्या आफुले धेरै समयदेखि झेलिरहेको बताउकी छिन् ।उनको पिता मुकेश गौतम जि न्यूज चेनलमा संयोजक हुन्। यामी पहिले एक आई ए एस अधिकारी बन्न चाहान्थि
महिलाले यौ’न सम्बन्ध राख्न चाहेको समयमा देखाउने ५ ब्यवहार यस्ता छन !
खबर अघि यो भिडियो, संसारभरी नै एउटा मान्यता छ, महिलालाई बुझ्न कठिन हुन्छ । केटीहरु कम बोलेर पनि धेरै कुरा भन्छन् । पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सक्दैनन् । उनीहरुको ब्यवहार पनि बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छन् । महिलाले यौनिक चाहना पनि शब्दमै व्यक्त नगर्ने एक अध्युनले देखाएको छ । पुरुष र महिलाको सन्दर्भमा हेर्दा भनिन्छ महिलालाई केहि बुझ्न कठिन हुन्छ । पुरुष र महिला एक अर्काका पुरक त हुन् तर श्रीमान श्रीमती नभुइकन उनीहरु एक अर्काको पुरक हुन सक्छन् भन्न मिल्दैन । पुरुष र महिलामा पुरुषहरु छिटो बोल्ने र धेरै बोल्ने स्वभावका हुन्छन् ।यहाँ महिलाले यौ'न सम्बन्ध राख्न चाहेको समयमा देखाउने ५ ब्यवहारको चर्चा गरिएको छ । -महिला अनपेक्षितरुपमा तपाइँको शरीरको सामिप्य'तामा आउन खोजिन् वा तपाइँलाई छुने बहाना खोजिन् भने बुझ्नुस् उनलाई यौ'न चा'हाना जागेको छ । महिलाहरु खुट्टाको बुढी